बुधबार, मार्च 24, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। स्कट हार्डडिग्री
अक्सर विकृत र अक्सर गलत अर्थ, ईमेल सूची भाडामा एक व्यापक रूपले स्वीकृत मार्केटिंग अभ्यास हो जुन एक शक्तिशाली आरओआई प्रदान गर्न सक्दछ, यदि तपाईंलाई इनबक्सको खोजी गर्ने र आदर गर्ने कुरा थाहा छ भने। यदि तपाईं अपरिचित हुनुहुन्छ वा ईमेल सूची भाँडामा लिदै अप्रभावित हुनुहुन्छ भने फाइदाहरूको साथसाथै यसको प्रमुख भिन्न कारकहरू र विचारहरू तल झर्ने काम छ।
दुर्भाग्यवश वैध ईमेल सूची भाडा अवसरहरू थोरै-तारकीय प्रदायकहरूको अभ्यासहरूले बिगारीएको छ कि तिनीहरू कम्पाइलरहरू, ईमेल ठेगानहरू विक्रेताहरू, वा टक-चेहरा झूटा हुन्। जस मध्ये कुनै पनि एक मार्केटर को ROI को मद्दत को लागी सम्भावना छ। किन यो गर्नुपर्छ? ईमेल प्राप्तकर्ताहरूको संगठनसँग कुनै सम्बन्ध छैन जुन उनीहरूको ईमेल ठेगाना राख्छ, र तपाईंको प्रस्ताव पठाउँदछ।
ईमेल मार्केटिंगमा मेरो १२ बर्षमा मैले फेला पारे कि उत्तम अवसरहरू प्रायः भाँडामा लिन्छन् साँचो ग्राहक सूचि। त्यो हो, ब्रान्ड गरिएको ईमेल सूचीहरू जुन प्रकाशनहरू, सेवाहरू, वा उत्पादनहरू जुन प्राप्तकर्तालाई थाहा छ, र मानहरूबाट व्युत्पन्न छन्।
यो कसरी काम गर्दछ र मुख्य विचारहरू
सूची मालिकहरूले मार्केटरको प्रस्ताव उनीहरूका ग्राहकहरूलाई पठाउँछन्।
मार्केटरले यो सेवाको लागि शुल्क तिर्दछ, प्राय: प्रति-हजार-हजार (सीपीएम) आधारमा।
प्रत्यक्ष मेल वा टेलमार्केटिंग विपरीत, बजारले कहिले सूची देख्दैन।
इनबाउन्ड मार्केटिlike विपरीत, यो सबै बहुमूल्य प्रस्ताव उत्पादन गर्ने बारेमा हो, सामग्री होईन।
सूची चयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो, प्रस्ताव र रचनात्मक पछि।
धेरै मार्केटरहरूको लागि ईमेल सूची भाँडा भनेको उनीहरूको आफ्नै ग्राहक सूचिहरू बढाउने, उनीहरूको पाइपलाइन प्याक गर्ने र पक्कै पनि सिधा बिक्री गर्ने सि of्गित साधन हो। यहाँ केहि फाइदाहरू छन्।
संघको मान (सूची मालिकको साथ)
कम लागत अधिग्रहण (अन्य प्रत्यक्ष च्यानलहरूसँग तुलना गर्नुहोस्)
यो द्रुत छ (परीक्षण परिणामहरू र दिनहरूमा समायोजन गर्नुहोस्, हप्तामा होइन)
उत्तम छुटकारा (लिखित अनुपालन र खरीदहरूको तुलनामा)
सूची मालिकहरूको लागि
सूची मालिकहरू धेरै स्वादहरूमा आउँछन् जस्तै खुद्रा विक्रेताहरू, कार्यक्रम निर्माताहरू, संघहरू, परम्परागत प्रकाशकहरू, र ब्लगरहरू। जुन सबै ईमेल सूची भाँडामा पनि फरक मान पाउन सक्दछन्।
राजस्व (प्रति ग्राहक $ १-२, औंठाको राम्रो नियम हो)
नियन्त्रण (के, कहिले, को)
सजिलो (कुनै बिक्री, मार्केटिंग, बिलि - - यदि तपाईंसँग काम गर्नुहुन्छ भनेaव्यावसायिक सूची प्रबंधन कम्पनी).
सरसफाइ (बाहिर बारम्बार हार्ड बाउन्सहरू
सहि सूचिहरू छनौट नगरीकन, बुद्धिमान् मार्केटरहरूले अब लिइरहेका छैनन् मेरो सामान किन्नुहोस् दृष्टिकोण यसको सट्टा सूची भाडा अभियानहरू थप रचनात्मक भइरहेका छन्, यस अभियानमा हेर्नुहोस् सर्फलाइन र रिप कर्लबाट। यो प्रकाशकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सीधा पहुँच प्रशंसनीय उत्पादनहरू, सेवाहरू, वा प्रस्तावहरू प्रदान गर्न सक्दछन् र यसको प्रक्रियामा उनीहरूको मन जित्न सक्छन् भन्ने कुराको यो उत्कृष्ट उदाहरण हो।
ईमेल भाडाको भविष्य
ईमेल डिलिरेबिलिटि अनुपालन वा खरीद गरिएको सूची प्रयोग गर्ने सूची मार्केटर्सहरूको लागि चलिरहेको चुनौती हो। वास्तबमा, चुनौती शायद एक वर्णन को धेरै हल्का छ। र त्यो राम्रो चीज हो। यसले मार्केटर्सहरूको लागि मेलबक्सहरू खाली गर्दछ जुन उनीहरूको प्रस्तावलाई वैध ग्राहकहरूको लागि लक्षित गर्न चाहान्छन् जसले चासो व्यक्त गरेका छन् र जसको समयमै आवश्यक हुन सक्छ, वा अवसरमा वास्तविक मूल्य फेला पार्दछ।
टैग: इ-मेल सूचीईमेल सूची भाडामासूचीसूची भाडा
बैठकहरू - अमेरिकी उत्पादकत्वको मृत्यु
मार्स 25, 2010 मा 10: 46 एएम
ईमेल मार्केटिङमा यस्तो बहुमूल्य अन्तर्दृष्टिको लागि स्कटलाई धन्यवाद। मैले यो विषय भर्खरै सुरु गर्ने कम्पनीहरूको लागि एकदमै चाखलाग्दो फेला पारे जुनसँग उत्कृष्ट उत्पादन छ तर त्यहाँ हुन रोजेका ग्राहकहरूको योग्य सूची छैन।
मलाई लाग्छ कि यसले त्यो व्यवसायलाई धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्न सक्छ, ती मध्ये एउटा, सूची मालिकको व्यवसायसँग सम्बन्धित छ। त्यसोभए सुनिश्चित गर्नुहोस् कि व्यवसायको तिनीहरूका ग्राहकहरू बीच राम्रो प्रतिष्ठा छ किनभने अन्यथा यसले तपाईंको ब्रान्डलाई फाइदा उठाउनुको सट्टा मार्नेछ।
Startups.com Q&A मा इमेल मार्केटिङको बारेमा कुराकानीमा सामेल हुनुहोस्
अप्रिल 25, 2016 मा 2: 56 PM
इमेल भाडा एजेन्सीको नाम के हो। मसँग १ मिल+ भन्दा बढी सदस्यहरूको सूची छ र म मेरो सूची भाडामा लिन वा बेच्न चाहन्छु। कसैले त्यसो गर्ने कम्पनीलाई सिफारिस गर्न सक्छ?